Fikambanana miaro ny zon’olombelona Manara-maso ny fahafaha-manohitra
Tonga nanotrona ny fivoriamben’ny mpanohitra tetsy amin’ny Carlton Anosy ny sabotsy teo ny filohan’ny fikambanana zon’olombelona mampandroso vahoaka sy zon’olombelona mijoro sady mpisehatra iraisampirenena momba izany, Chandoutis Raoera.
Tsy mpanohitra fanjakana izahay akory, hoy ny tenany, fa amin’ny maha mpanara-maso dia tonga teto. Mazava tsinona ny fanambarana iraisampirenena momba ny zon’olombelona izay milaza fa manana zo haneho hevitra sy hivory an-kalalahana ny rehetra. Ny lalana 2011/013 dia mametraka andininy sy fehin-teny maromaro mikasika ny fitantanam-pirenena ary ao anatiny ny fanoherana.Tsara noho izany, hoy izy, ny mifampihaino sy mifanome hevitra ary toromarika fa tsy mifanongana. Mandinika sy mihaino ary manitsy izahay. 31 fehezanteny ny fanambarana iraisampirenena momba ny zon’olombelona manambara ny fahafahan’ny tsirairay ary nosoniavintsika izany, hoy hatrany ity mpisehatra amin’ny fikambanana miaro ny zon’olombelona ity, ka aoka samy hijery ny tombontsoan’ny vahoaka na ny mpitondra na ny mpanohitra.